Nhau - Tinofanira sei kunyatso sarudza mhando yepamusoro CNC lathe vagadziri
Iwo makuru epamusoro-soro mutengesi zviwanikwa zvemakanika ekugadzirisa indasitiri akaiswa muPearl River Delta uye Yangtze Rwizi Delta mudunhu, mune iyo nhamba yeCNC lathe yekugadzirisa vagadziri iri zvakare rakakura kwazvo boka. Saka sei kunyatso sarudza CNC lathe kugadzira vagadziri? Wally michina tekinoroji ichataura newe nezve:
Chekutanga pane zvese, tisati tasarudza iyo CNC lathe yekugadzirisa fekitori, isu tinofanirwa kunzwisisa kuti yemhando yepamusoro CNC lathe inogadzira ine izvo hunhu, maitiro ekuumba iyo yemhando yepamusoro mhando?
1. Yakakwirira mhando CNC lathe vagadziri vanofanirwa kutanga vatarisa pamufananidzo uye tsika yebhizinesi. Chikonzero chakakosha nei zvakaoma kuumba tsika muindasitiri yekugadzira michina ndeyekuti hunhu hwese hwevashandi hwakashata. Kana iyo CNC lathe yekugadzirisa fekitori ine yakanaka yekunze mufananidzo uye yemakambani tsika, zvinoratidza kuti manejimendi manejimendi anoteerera kwazvo, uye ane yakanakisa kudzidziswa kwevashandi uye tsika kuunganidzira Hunhu hwevanopa mhando.
2. Yechipiri zvinhu zvepamusoro-soro CNC lathe yekugadzirisa fekitori ndiyo yekutanga 7S manejimendi. Inofananidzwa neye indasitiri yemagetsi, iyo 7S mune yeindasitiri yekugadzirisa indasitiri yakanyanya kunetsa kuita. Kana kurongeka kwe7S uye kugadzirisa mumusangano kwakanaka kwazvo, isu tinofanirwa kuita basa rakanaka kwazvo munzvimbo ye7S kupatsanurwa, kuiswa kwezvinhu nekumisikidza mashandiro Vagadziri vanogona kudzora kuitika kwezvakawanda zvinogadzirwa zvigadzirwa, kuendesa kunenge kuchikurumidza.
3. Tarisa uone kuzadzikiswa kweiyo bhizinesi manejimendi manejimendi, kotesheni yekugadzirisa maitiro, kurongeka dhizaini maitiro, maitiro ekuvandudza maitiro, maitiro ekudzora maitiro uye maitiro maitiro. Kana izvo zvataurwa pamusoro zvasangana, zvinoratidza kuti mashandiro ebhizinesi zvakare akanakisa uye ane hunhu hwemhando yepamusoro CNC lathe yekugadzirisa fekitori.
Neshoko, rakanakisa CNC lathe vagadziri vane yakanaka yekunze mufananidzo uye vakura manejimendi timu, uye -refu mashandiro akaumba yakanaka yemakambani tsika mamiriro. Chiono chevolley michini tekinoroji ndechekuti chaiyo machining inogona kubatsira hunyanzvi hwekuvandudza Isu tinoshuvira kuve yakasarudzika processor mumunda wekugadzira michina uye nekupa kuChina hunyanzvi uye tekinoroji.